Taorian’ny angom-baovao sy fanaraha-maso natao dia tovolahy 3 no voasambotra teny Andafiatsimo ny talata 16 jolay 2019 tokony ho tamin’ny 5 ora maraina. Izy ireto no mpanendaka eny amin’ny faritra MagaGM sy Ankady iny. Manomboka amin’ny 6 ora hariva ka hatramin’ny 10 ora alina ny fotoana fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny.
Olona avy manao karaoke sy mamonjy fodiana alina no tena lasibatra. Mianjaika toy ireny avy namonjy alim-pandihizana ireny izy ireo ary tsy mifidy asiana fa izay sendra azy dia mahita faisana.
Ny iray hafa kosa dia voasambotra teny Tanjombato omaly alarobia 18 jolay tamin’ny 6 ora maraina. Eny amin’iny lalana RN7 eny izy no manatanteraka ny asa ratsiny. Ireo mpody alina sy mpitondra moto indray no tena lasibatra. Manao andiany telo hatrany izy ireo manatanteraka ny asa ratsiny saingy ity lehilahy ity no tra-tehaka. Efa nigadra teny am-ponja noho ny resaka fanendahana moto ihany koa ity lehilahy ity.